Dowladda Soomaaliya oo beenisay in Dhalinyaradii tababarka loo qaaday lagu dilay dagaal - Awdinle Online
Xukuumadda Soomaaloya ayaa si adag u beenisay warar Maalmihii la soo dhaafay Warbaahinta qaarkood ay baahiyeen ee ahaa in qaar kamid ah dhalinyaradii tababarka u jooga waddamada Dibadda ka qeyb galeen dagaalkii Waqooyiga Itoobiya lana dilay.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in wararkaasi yihiin been abuur ay dadka qaar siyaasad ka raadinayaan.
“Ma jiro ciidan soomaaliyeed oo Tigray ka dagaalamay iyo ciidan ay itoobiya dowladda Soomaaliya weydiisatay ayuu yiri” Wasiirka Warfaafinta.
Wasiir Dubbe wuxuu tilmaamay in dadka dacaayada noocaas oo kale ah faafinaya ay ka so horjeedaan oo ay diidan yihiin in soomaaliya ay yeelato ciidan xoog leh oo amaankeeda ay ku filnaato.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa Warbaahinta iyo Baraha Bulshada waxaa aad looga hadal haayay in Boqolaal kamid ah Dhalinyaradii tababarka Ciidanimo loogu qaaday Ereteriya laga qeyb geliyay dagaalkii ka dhacay Gobolka Tigreega Itoobiya kuna dhinteen.
Previous articleMaleeshiyaad hubeysan oo dilay Nabadoon Caan ah
Next articleMareykanka oo duqeyn la beegsaday Xarumo Al-Shabaab